Izindaba - Ulisetha Kanjani Izinga Lokugeleza Kwephampu Ye-Peristaltic?
Indlela Yokusetha Izinga Lokugeleza Kwephampu Ye-Peristaltic?
1. Buza ngokuya ngethebula lepharamitha yokugeleza
Ngokuya ngekhanda lephampu kanye Nohlobo lwepayipi, buza 《Ithebula lepharamitha yokugeleza kweHose》ye-Leadfluid ukuze uthole isivinini esihambelana nokugeleza ngokuqondile noma ubheke izinga lokugeleza ngakunye, ngokuya ngefomula yokubala ukugeleza, bala isivinini esihambisana ukugeleza okudingekayo, bese ulungisa isivinini futhi uthole ukugeleza okuhambisanayo.
Indlela ingasetha isivinini futhi igeleze cishe, kulula ukuyisebenzisa, evame ukusetshenziswa kumaphampu e-peristaltic alawulwa isivinini.
2. Bala ubudlelwano obuhambelanayo phakathi kwejubane nokugeleza
Ukusetha noma iyiphi isivinini esingu-n1, linganisa isikhathi esithile esingu-t1, ivolumu yangempela yoketshezi olulethiwe Q1.
Ngokuvumelana ne-a=Q1/n1 ukubala i-flow coefficient futhi ngokuvumelana nefomula n2=Q2/a
ukubala isivinini esijikelezayo esidingekayo se-n2, lungisa isivinini ukuze uthole ukugeleza okudingekayo kwe-L1.
Le ndlela ingathola ukunemba kokugeleza okuphezulu, kodwa ukusebenza okuyinkimbinkimbi, ifanele amaphampu okulawula isivinini adinga izinga lokugeleza okuphezulu nokunemba komthamo, lapho izimo zangaphandle zishintsha noma lapho kusebenza isikhathi eside, zidinga ukwenza ukulungiswa kokugeleza ngesikhathi, ukuze kugcinwe ukunemba kokugeleza okuphezulu.
3. Amapharamitha wokugeleza kokufaka ngqo
Uhlobo lokugeleza okuhlakaniphile okuholayo nohlobo lokusabalalisa lwephampu ye-peristaltic isebenzisa isibonisi se-LCD enencazelo ephezulu, vele ukhethe ikhanda lepompo kanye nemodeli yeshubhu yephampu kuqala, bese emva kwalokho amapharamitha wokugeleza kokokufaka ngokuqondile.
Le ndlela ingathola ukunemba kokugeleza okuphezulu, vele ulandele imiyalo, kulula ukuyisebenzisa, izinga eliphezulu lobuhlakani.Lapho izimo zangaphandle zishintsha noma lapho usebenza isikhathi eside, kudingeka wenze ukulungiswa kokugeleza ngesikhathi, ukuze kugcinwe ukunemba kokugeleza okuphezulu.Inzwa yephampu nokugeleza yakha isistimu yeluphu evaliwe, ukulungiswa kokugeleza kwesikhathi sangempela okuzenzakalelayo ngokugcwele, ibona ukudluliswa okuzinzile kwesikhathi eside.